Iyo Yekupedzisira Dungamira Yekupinza MuEurope | Save A Train
musha > Travel Europe > Iyo Yekupedzisira Dungamira Yekupinza MuEurope
(Last Updated On: 20/05/2020)
Munyika yose, kupinza kune zvakasiyana zvakasiyana nemaitiro, semuyenzaniso: Kupa mazano muSouth Africa kunodiwa, sezvazviri muna USA. Unotarisirwa kusiya zano repakati 15 uye 25% muAmerica, uye kana ukasadaro unogona kudzingwa neanotsamwa anotsamwa. Asi zvakadiniko neEurope? Mabhiri mazhinji muEurope achasanganiswa nemazano, zvisinei, izvi zvinosiyana nyika nenyika. Kuziva iyo chaiyo yekupinza maitiro munyika yako yekuenda kunodzivirira kuvhiringidzika uye zvinogona kusanzwisisika maitiro. Saka verenga kune iyo yekupedzisira iyo nhungamiro yekupinza muEurope!
Ekupedzisira Kutungamira Kuti Kupa Mu Europe Nebasa
Kupa mazano muEurope kunowanzosiyana zvichienderana nerudzi rwesevhisi yauri kugamuchira. Semuyenzaniso, iwe ungatarisirwa kunongedza waiter muresitoreji-nyeredzi mashanu pane imwe nzvimbo kune server shure kwekambani. Bartenders aisazotarisira chipepa zvachose mune dzimwe nguva, kwaizo driver vatyairi. Uchishandisa ungwaru hwako, uye rupo nguva dzose inzira yakanaka yekuenda kana uchisarudza pane chaiyo tip. wo, nzvimbo zhinji dzinoda kuti utore muhomwe, saka ive shuwa kutakura mashoma Euro zvinyorwa pauri nguva dzese.
Kupa zano Muna Restaurants
Chero mamiriro ezvinhu apo chikafu kana zvinwiwa zvinounzwa patafura zvinowanzoda chipikiri. Iyo huwandu inoenderana nerudzi rwekudya iwe urikunakidzwa. Maitiro akajairwa ekupinza muEurope ndere kusiya chikwereti chimwe kana zviviri zveEuro pamusoro peiyo mari yechinwiwa kana doro rechinwiwa asi pasina chikafu chakarairwa.. Kudya kwakazara munzvimbo yekugara-pasi kwakasiyana. In iyi, a few Euro’s per person is usually sufficient. Five-star restaurants across Europe usually include the tip in their bill. Ive nechokwadi chekutarisa izvi sezvo pasina chikonzero chekusiyira imwe chiputi kunze kwekunge iwe wakanyatsofarira basa rako. Kushumirwa kwakanaka dzimwe nguva kunoda imwe nyowani yekuwedzera, saka mune zviitiko izvi, unogona kuenda nzira dzese kusvika 15%.
Yakawanda pubs kana mabara mhiri kondinendi haatarisire mazano zvachose. Bartenders anobhadharwa muhoro, uye nepo mashoma emari ari muchirongo cheki anonyanya kukoshesa, hazvidikanwe. kana iwe uchiita tip, zvakare rangarira kushandisa chete mari, zvingave zvinyorwa kana mari. Kana iwe uri pamugumo wakasununguka pano pane runyorwa rwe 5 Best Bars With Live Music In Europe.
Stylists Uye Spa's
Vanhu vazhinji vanoda kuwana itsva nyowani hairdo, kana kuzorodza pari pazororo. Sezvineiwo iwe uchawana spa uye masiteki muEurope yose, kazhinji mumaguta ese. Kupa zano, mune izvi zviviri, kazhinji inosvika gumi muzana. Kana iwe uri kufara zvinoshamisa neshumiro yawakagamuchira, iwe unogona kuenda kwakakwirira se 15%.
Mahotera ndeye mubvunzo unowanzoitika kana zvasvika kumubvunzo wekupeta muEurope. Sezvo mutemo wegunwe, mumwe anofanirwa kugara achitevera iyo Yeuro Euro nhungamiro. Izvi zvinoreva kwazvo kuti iwe unosiya imwe Euro mumaritsi pesevhisi. Kana bellhop kana porter inotakura mabhegi ako, ipapo imwechete Euro kubhegi zvakakwana. Kuchenesa imba kunofanirwa kugamuchira Euro pazuva. Kupa zano macomputer ako zvinoenderana nekufunga kwako, asi zvinofanirwa kuchitsamira padanho rebasa rawakagamuchira. Kana ivo vakaenda pamusoro nepamusoro kuti dai imi muchigara musingakanganwiki uye nekunakidza, ipapo chipenga chemashanu kusvika kugumi Euro kana kutopfuura icho chakakodzera.
Taxi uye Ubers chikamu chemukati chekusvika kutenderera kuEurope. Kana uchisarudza zvipi zvekupa, zviri nani kugara uchifunga kuti mutyairi anobhadharwa sei. nyanya, Zvisinei, maviri Euro tiketi kune pfupi kapfupi kana Uber kukwira zvakakodzera. Mapurogiramu akadai saUber anokutendera kunongedza mutyairi nemagetsi, nepo metered metekisi ichada mari. Kupa zano muEurope uchifamba kwakafanana nekupuruzira mumabhawa kana mumaresitorendi. Ramba uchifunga kuti hazvisi hazvo kudikanwa nguva dzose, but often appreciated. Kutakurisa matikiti ako echitima enyu European rwendo iri nyore uye kumabvazuva neiyo Inodhura Yechitima Matikiti Webhusaiti Munyika.
Ekupedzisira Kutungamira Kuti Kupa MuEurope NaNyika
Nyika zhinji dzinotevedzera nhungamiro imwechete kana tasvika pakupomba muEurope. Ehe saizvozvo, mumwe anofanirwa kugara tsvaga kwaunoda kuenda usati wafamba kuitira kuti uve nechokwadi chekuti uri kuzere kusvika ikozvino. chitima kufamba kazhinji inogona kukutora iwe kuburikidza nenyika dzinoverengeka panguva imwe chete, saka kunyatso kuva nechokwadi chekuita mune yega yega kunogara kuchibatsira. Dzimwe nyika dzinosiyana nevamwe vadzo maererano nemitemo, zvisinei.
Iceland Uye Scandinavia
Kunyangwe chiri kudzikisira kune kwavo Viking mavambo kana kungori nyore zvematongerwo enyika, nyika idzi dzinokuda iwe kuti urege kupotsa wakati. Maresitoreti mazhinji nemasevhisi anozove nemucheto unosanganisirwa mubhadharo. Izvo zvichiri zvakakodzera kuti utenderedze bhiri kusvika kuEuro iri padyo panzvimbo yepipi pamwe nemari kana kadhi rechikwereti.
MaGreek anoita zvese zvese nenzira dzakasiyana, uye kupfura hakuna mutsauko. Mabhiridha akakura anoda matipi madiki uye madiki bhiriji anoda matipi akakura.
Siya zvakadaro a 5% muromo, muhomwe yemaseva, even if the bill includes gratuity. Cash is always king in most European countries, uye Austria haina kumbosiyana.
Vanozivikanwa neushamwari hwavo, marudzi maviri aya achatakura mabhegi ako achifara. Kubvunza kune vatakuri vemitoro hakuna kukosha, uye kazhinji hazvitarisirwa. Kuva nenyasha uye kutaura uchitenda neruremekedzo ndizvo, zvisinei, zvinotarisirwa. Kana iwe uchida kugamuchira sevhisi imwechete mune inotevera kubva kune porter yako, ave nechokwadi chekuvabvuma zvakanaka.
Vanhu vazhinji vekuBritain vakaedza kutsanangudza vashanyi kuti kupa nzvimbo yekuchengetera dzimba hakunyatsodiwa. Kana zvasvika pakupora muEurope, uyu ndiwo mumwe wemitemo yakasimba. Usasiya zano pane yako hotera mukamuri, kazhinji inogona kuiswa pamberi petafura sekurasika mari. Bartenders zvakare haatarisi matipi, uye kuapamha iwo anogona kuverengerwa. Nematambudziko ese, iva ane hushamwari uye bvuma wako bartender. Isa mashoma mashoma muhari yetangi kana paine imwe. Kana zvisiri, zvirinani siya chimbuzi kunze kwe equation.
Kutenderedza Yese Ruzivo Nezvekupa Tipping MuEurope
Zano rakanakisa rekupinza muEurope kuita basa rako rechikoro rinoitirwa kumba. Verenga zvese nezvenyika, kana nyika dzauri kuronga kushanyira. rangarira izvozvo nzendo dzechitima kazhinji dzinotora iwe kupfuura dzinoverengeka nyika kuti iwe ugone kumira pa. Gara uchiuya nemari, zvese mari, uye zvinyorwa zvishoma kuitira kupinza muhomwe. Kana iwe usina chokwadi nezvezvirongwa, namatira kune gumi muzana mutemo wekudyira, and the one Euro rule for everything else.
yeuka, Tinofarira kukudzidzisa iwe nezvekufamba, saka kana nguva yacho iri chaiyo uye iwe unofunga kufamba, yeuka kuti Chitima Kufamba inyanzvi yedu uye sarudza Save A Train, tinoda kukubatsira kuti unakirwe nerwendo rwako!
Unoda embed yedu Blog romukova “Iyo Yekupedzisira Dungamira Yekupinza MuEurope” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/guide-tipping-europe/ ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#resitorendi europetravel chikafu TippingEurope Train Travel traveltips Vacations